အနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေသူ ထွန်းကိုကိုရဲ့ Swab testing ဆေးစစ်ချက်အဖြေကောင်းမွန်စေဖို့ ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ ကျော်သူ - Cele Connections
အနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေသူ ထွန်းကိုကိုရဲ့ Swab testing ဆေးစစ်ချက်အဖြေကောင်းမွန်စေဖို့ ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ ကျော်သူ
ပရဟိတမင်းသားကြီးဖြစ်တဲ့ ကျော်သူကတော့ အများအကျိုးနဲ့ ပက်သတ်လာရင် ရှေ့ဆုံးကနေ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လှုပ်ရှားသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်သူက နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ရဲ့ ဥက္ကဌတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ နာကူအဖွဲ့မှာ အနုပညာရှင်အချို့လည်း စေတနာ့လုပ်အားပေးများအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ကျော်သူက Covid -19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရတာကြောင့် ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ကျော်သူက သူ့ကို အနီးကပ်စောင့်ရှောက်ပေးနေသူ ထွန်းကိုကို ကို Swab testing လာရောက်ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။ “ကိုယ့်သူစစ် သူ့ဆရာဝန်စစ်ပြီ။ ယနေ့ ရဲဘော်ရဲဘက်ကြီး ကိုထွန်းကိုကိုက ကျွန်တော့်အားဆီးချိုသွေးချိုစစ်ရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကာ ၊ ဆရာဝန်များကလည်း ကိုထွန်းကိုကိုအားလာရောက်၍ Swab testing လာရောက်ပြုလုပ်ပြီဖြစ်သည်။ ကံကောင်းပါစေ …. ရဲဘော်ထွန်းကိုကို။” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေထားပါတယ်။၏
ထွန်းကိုကိုကတော့ Covid -19 ရောဂါပိုးရှိသူ ကျော်သူကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ သူ့ကိုယ်သူ ရောဂါကူးနိုင်ခြေအရမ်းများမှန်းသိလျက်နဲ့ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း ထွန်းကိုကိုတစ်ယောက် ဆေးစစ်ချက်အဖြေကောင်းမွန်စေဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အနီးကပျပွုစုစောငျ့ရှောကျပေးနသေူ ထှနျးကိုကိုရဲ့ Swab testing ဆေးစဈခကျြအဖွကေောငျးမှနျစဖေို့ ဆုတောငျးပေးနတေဲ့ ကြျောသူ
ပရဟိတမငျးသားကွီးဖွဈတဲ့ ကြျောသူကတော့ အမြားအကြိုးနဲ့ ပကျသတျလာရငျ ရှဆေုံ့းကနေ တကျတကျကွှကွှ ပါဝငျလှုပျရှားသူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကြျောသူက နာရေးကူညီမှုအသငျး (ရနျကုနျ) ရဲ့ ဥက်ကဌတဈယောကျဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ နာကူအဖှဲ့မှာ အနုပညာရှငျအခြို့လညျး စတေနာ့လုပျအားပေးမြားအဖွဈ တာဝနျယူဆောငျရှကျနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ ကြျောသူက Covid -19 ရောဂါပိုးကူးစကျခံခဲ့ရတာကွောငျ့ ဝဘောဂီဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာတော့ ကြျောသူက သူ့ကို အနီးကပျစောငျ့ရှောကျပေးနသေူ ထှနျးကိုကို ကို Swab testing လာရောကျပွုလုပျနပွေီဖွဈကွောငျး အခုလိုပဲ ပွောပွလာပါတယျ။ “ကိုယျ့သူစဈ သူ့ဆရာဝနျစဈပွီ။ ယနေ့ ရဲဘျောရဲဘကျကွီး ကိုထှနျးကိုကိုက ကြှနျတေျာ့အားဆီးခြိုသှေးခြိုစဈရနျ ကူညီဆောငျရှကျပေးကာ ၊ ဆရာဝနျမြားကလညျး ကိုထှနျးကိုကိုအားလာရောကျ၍ Swab testing လာရောကျပွုလုပျပွီဖွဈသညျ။ ကံကောငျးပါစေ …. ရဲဘျောထှနျးကိုကို။” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ မြှဝထေားပါတယျ။
ထှနျးကိုကိုကတော့ Covid -19 ရောဂါပိုးရှိသူ ကြျောသူကို ပွုစုစောငျ့ရှောကျဖို့ သူ့ကိုယျသူ ရောဂါကူးနိုငျခွအေရမျးမြားမှနျးသိလကျြနဲ့ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးကလညျး ထှနျးကိုကိုတဈယောကျ ဆေးစဈခကျြအဖွကေောငျးမှနျစဖေို့ ဆုတောငျးပေးကွပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ရန်ကုန်မြို့က အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် ကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီး စားသောက်ရိက္ခာများ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်